Cali Yare Cali ma Farmaajo ayaa dhabarka xijiyay mise Qoor Qoor ayaa u bareeray? - Caasimada Online
Home Warar Cali Yare Cali ma Farmaajo ayaa dhabarka xijiyay mise Qoor Qoor ayaa...
Cali Yare Cali ma Farmaajo ayaa dhabarka xijiyay mise Qoor Qoor ayaa u bareeray?
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiye ku-xigeenka dhanka Amniga ee Maamulka Gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa shalay laga hor-istaagay inuu u safro magaalada Guriceel si uu kadib usii beegsado magaalada Dhuusamareeb oo lagu qabanayo doorashada kursiga HOPP#147, oo uu Cali kamid yahay Dadka u sharaxan.
Mid kale oo dadka qaarkiis isla dhex marayaan ayaa jirta taas oo ah in Farmaajo lagu qanciyey xilli hore inuu badalo musharixiisa kursiga HOP#147 iyadoo lagu qanciyey inay adag tahay in Cali Yare uu kursiga kasoo dhex qaato qabiilkiisa, markaas kadibna waxaa la sheegay in liiska kooxda Farmaajo ee Galmudug inuu ku xooganaa ninka la yiraahdo Cabdicasiis Ashakir oo kamid ah la taliyaasha Farmaajo.
Dad aad xog-ogaal ugu ah arrintaan waxay ku warameyn in kulankii ugu dambeeyey ee Farmaajo iyo Qoor Qoor ee kuraasta Galmudug ku saabsanaa inuu Farmaajo miiska soo saaray Cabdicasiis Ashkir kadibna uu Qoor Qoor diiday.